UVerreyne ethubeni lokuvala esikaDe Kock kumaProteas
UQUINTON de Kock oseshiye phansi ekudlaleleni amaProteas emidlalweni yama-test Isithombe: BACKPAGEPIX
UKYLE Verreyne usethubeni lokuvala isikhala sikaQuinton de Kock eqenjini lamaProteas elizobhekana ne-India emdlalweni wesibili we-test ozoqala eWanderers eGoli namuhla.
I-India inqobe umdlalo wokuqala e-Centurion ngesonto eledlule ngama-runs angu-113, ngaphambi kokuthi u-De Kock anqume ukuyeka ukudlala imidlalo yama-Test.
Yena nomkakhe balindele ingane yabo yokuqala futhi ukholelwa ekutheni ukudlala imidlalo yosuku olulodwa neye-T20 kuphela eqenjini lesizwe kuzomnika isikhathi esanele nomndeni wakhe.
U-De Kock (29) wadlala umdlalo wokuqala we-Test kuma-Proteas bedlala ne-Australia eGqeberha ngo-2014. Udlale imidlalo engu-54 ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi.
“Lesi akusona isinqumo engifike kuso kalula nje,” kusho uDe Kock esitatimendeni asikhiphile. “Ngithathe isikhathi esiningi ngicabanga ukuthi ikusasa lami linjani nokuthi yini okufanele ize kuqala empilweni yami.
“Umndeni wami uyikho konke kimina futhi ngifuna ukuba nesikhathi esanele nawo njengoba sizoqala uhambo olusha sesingabazali. Ngiyayithanda imidlalo yama-Test futhi ngiyathanda ukumela izwe lami. Ngikujabulele konke okuhle nokubi okwenzekile kodwa manje sengithole into engiyithanda kakhulu.
"Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge wonke umuntu obe yingxenye yohambo lwami kusukela ekuqaleni. Ngibonga abaqeqeshi bami, ozakwethu nabaphathi esengisebenzisene nabo umndeni nabangani bami ngokungeseka.
"Lokhu akusho ukuthi sekuphelile ngami kumaProteas ngoba ngisazozinikela ngokugcwele emidlalweni yosuku olulodwa neye-T20.
AmaProteas akabizanga mdlali omusha ozovala isikhala sikaDe Kock ngaphambi komdlalo wesibili, okusho ukuthi umdlali osemncane weWestern Province uVerreyne (24) angase akhushulelwe eqenjini elizoqala.
Udlale umdlalo wakhe wokuqala wosuku olulodwa kumaProteas ngoFebhuwari 2020 wadlala owokuqala weTest bedlala neWest Indies ngoJuni ngonyaka odlule.
Inkakha yamaProteas uHashim Amla ikholelwa ekutheni noma kungafakwa bani ozovala isikhala sikaDe Kock kwi-wicketkeeper, ukushiya kwakhe kusho ukuthi uTemba Bavuma kumele akhushulwe ohlwini lwababhethayo.
“Abadlali bethu ababili abashaya kahle phakathi nendawo nguTemba noQuinton,” kusho u-Amla. “Njengoba uQuinton esephumile kuzovuleka isikhala esikhulu. Kumqoka ukuthi uTemba akhushulwe kwababhethayo.
Umdlalo wokugcina phakathi kwamaProteas ne-India uzodlalelwa eNewlands eKapa.